St. Helena dia anglisy, afrikana, tsy misy COVID ary Google Connected izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Birao fizahantany afrikanina » St. Helena dia anglisy, afrikana, tsy misy COVID ary Google Connected izao
Birao fizahantany afrikanina • Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • fanorenana • teknolojia • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Tamin'ny taona 2018 dia lasa lasa anisan'i Afrika i St.
Ny olan'ny serasera dia nanakana ny Faritra Britanika tany amin'ny Ranomasimbe Atlantika atsimo hifandray.
Androany dia manamarika fotoana iray amin'ny tantara niomerika ny fantsom-pifandraisan'ny tariby finday an'i Equiano an'i Google izay nidina tany amin'ny nosy St Helena any amin'ny Ranomasimbe Atlantika atsimo, nahatonga ity Teratany anglisy ampitan-dranomasina ity ho fipetrahana tariby voalohany ho an'ny tetik'asa Equiano manelanelana an'i Eropa sy atsimon'i Afrika.
Tamin'ny volana desambra 2019, ny Governemanta St Helena (SHG) dia nanao sonia fifanarahana tamin'i Google mba hampifandray ny Nosy St Helena amin'ny telegrama fibre optic any Equiano undersea ambanin'ny tany, manome ny fifandraisana voalohany haingam-pandeha sy fibre optika voalohany an'i St Helena.
Manamarika vanim-potoana teknolojia vaovao ho an'ny nosy faharoa misy mponina lavitra indrindra eto an-tany ary hisy fiatraikany lehibe tsy amin'ny fiainana andavanandron'ireo mponina eo an-toerana ihany, fa amin'ny fahafahany misarika ny fampiasam-bola anatiny sy ny fizahantany.
Saint Helena dia fananana britanika any amin'ny Oseana Atlantika atsimo.
Nampifandraisin'i Google fotsiny i St. Helena ho toy ny faritra fizahan-tany britanika afrikanina britanika covid
Hatreto dia mbola tsy fantatra ny COVID-19 any amin'ny faritra lavitra an'izao tontolo izao.
Ity nosy tropikaly volkanikanina lavitra ity dia misy 1,950 1,210 kilometatra (4,000 mi) andrefan'ny moron'ny atsimo andrefan'ny Afrika, ary 2,500 kilometatra atsinanan'ny Rio de Janeiro amin'ny morontsirak'i Amerika atsimo.
Ny sambo sosona tariby Teliri, nitondra ny tariby, tonga avy tany Walvis Bay tamin'ny 31 Aogositra 2021 tao Rupert's Bay. Ny fantson'ny tariby dia natsipy niala ny sisin'ny sambo, ary napetrak'ireo mpanao antsitrika ny tariby tao anaty fantsom-panazavana efa voapetraka mialoha, nanomboka tamin'ny 6 maraina androany. Ny faran'ny tariby dia napetraka tao amin'ny Modular Cable Landing Station (MCLS) any Rupert, izay hampifandraisan'ny tariby amin'ny fotodrafitrasa nomerika nosy. Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia tonga ny ekipa misy mpiasa roa ambin'ny folo tamin'ny alàlan'ny sidina fiaramanidina avy any UK, France, Greece ary Bulgaria mba hanamorana ny fiakarana ny tariby sy hizaha toetra ireo fitaovana famahanana herinaratra ao amin'ny Station Landing.
Ny Lehiben'ny fampandrosoana maharitra an'i SHG, Damian Burns, dia naneho hevitra hoe: “Ity tetik'asa ity dia tafiditra ao amin'ny Paikadin'i St Helena nomerika ary tokony hisy fiovana lehibe amin'ny fiainana andavanandron'ireo mponina eto amintsika. Ny fanabeazana an-tserasera dia tokony havaozina, tokony hisokatra ny fahafaha-manao fampiasam-bola vaovao, ny fidiran'ny nosy dia tokony hanana fidirana bebe kokoa amin'ny serivisy telemedicine, ary tokony ho afaka hisarika ny mpifindrafindra nomerika na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao isika.
Hoy i Burns: Ny tariby Equiano dia mametraka an'i St Helena eo amin'ny sari-tany niomerika, ary raha nijanona tsy nisy COVID izahay, ny fiantraikan'ny areti-mifindra manerantany dia midika fa tsy maintsy nampidirina ireo quarantine sy ireo fepetra fisorohana hafa eo amin'ny sisintaninay, misy fiatraikany amin'ny fandraharahana sy fizahantany eto amin'ny nosy. Ity andro goavana ity dia manamarika fotoana iray lehibe amin'ny fotoana ahitantsika ny ho avy fanarenana sy fanambinana ho avy.
Ny sampan'ny tariby St Helena dia sahabo ho 1,154km ny halavany ary hampifandray ilay nosy amin'ny vatan-kazo lehibe Equiano, mampitohy an'i Eropa sy atsimon'i Afrika. Ny haingam-pandeha dia manomboka amin'ny gigabits an-jatony vitsivitsy isan-tsegondra ka hatrany amin'ny terabits marobe, haingana kokoa noho ny serivisy zanabolana ankehitriny.
Hivoaka mivantana ny tariby raha vantany vao apetraka, hatanjaka ary hosedraina ny sampana St Helena sy ny vatan-kazo lehibe Equiano; ary rehefa tafapetraka ireo fotodrafitrasa sy mpanome eo an-toerana ary vonona ny handeha mivantana ao amin'ny St Helena.
Vaovao tsara koa izany ho an'ny Fizahan-tany St. Helena, mpikambana ao amin'ny Birao fizahantany afrikanina